June 2021 - News 88 Post
चीनमा बासस्थान छोडेर हिँडेका हात्ती जंगलमा सुस्ताए, तस्विर भयाे विश्वभर भाइर (फाटाेहरू)
June 9, 2021 N88LeaveaComment on चीनमा बासस्थान छोडेर हिँडेका हात्ती जंगलमा सुस्ताए, तस्विर भयाे विश्वभर भाइर (फाटाेहरू)
पछिल्लो समय चीनमा बासस्थान छोडेर हिँडेका हात्तीको चर्चा संसारभरि भइरहेको छ। १५ वटा हात्ती आफ्नो बासस्थान छोडेर अहिलेसम्म ५ सय किलोमिटर हिँडिसकेका छन्। उनीहरू कहाँ जान हिँडेका हुन् भन्ने पत्तो छैन। पछिल्लो समय भने हिँड्दाहिँड्दै थाकेका हात्ती सुस्ताएको भिडिओ र तस्बिरले चीनभित्र र बाहिर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान तानेको छ। हात्तीहरू गन्तव्यविहीन यात्रामा निस्किएपछि चिनियाँ […]
इश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘अब म एमालेको अध्यक्ष हुन योग्य र तयार छु’
June 9, 2021 June 9, 2021 N88LeaveaComment on इश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘अब म एमालेको अध्यक्ष हुन योग्य र तयार छु’
काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव इश्वार पोखरेलले आफु एमालेको अध्यक्षका लागि योग्य रहेको बताएका छन । शीर्ष नेतृत्वको विवाद र टकरावले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरु आक्रोशित बन्न थालेका छन् । ओली–माधवले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा अन्य दलसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दोस्रो तहले नेतृत्वको विकल्प खोज्न भूमिका खेलिरहेको छ । उनी बताउँछन, […]
माओवादीले मागेजति नपाएपछि…..
June 9, 2021 N88LeaveaComment on माओवादीले मागेजति नपाएपछि…..
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को सरकारमा नजाने भएको छ । आफूले मागेजति मन्त्रालय नपाएपछि माओवादी सरकामा नजाने भएको हो । जसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय नदिने भएपछि माओवादी रुष्ट बनेको हो । आजै नेपाली काँग्रेस र जसपाबीच सरकार गठनका विषयमा सहमति भए पनि माओवादीबीच कुनै सहमति नभएको जनाइएको छ । याे पनि पढ्नुस् […]
June 9, 2021 N88LeaveaComment on एमाले सुदूरपश्चिममा कसले कसलाई कारबाही
प्रकाश मिश्र धनगढी । नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको यही जेठ १० गतेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका पक्षमा एमालेकै बहुमत सदस्यले विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशभित्र एमाले पार्टी र संसदीय दल दुई धारमा देखिएर एकले अर्काे पक्षलाई […]
सर्वोच्चबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ खत्तम
June 9, 2021 N88LeaveaComment on सर्वोच्चबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ खत्तम
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतको आदेशले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अदालतबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना हालका लागि बन्द भएको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेपनि त्यो तत्काल पूरा नभएको हो । सर्वोच्चले संसद विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छामा ब्रेक लागेको छ । कारण देखाऊ आदेश सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी […]
२०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण : यी ९ राशिमा पर्दैछ प्रभाव
June 9, 2021 N88LeaveaComment on २०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण : यी ९ राशिमा पर्दैछ प्रभाव
एजेन्सी । २०७८ सालको पहिलो खग्रास सूर्यग्रहण जून १० अर्थात जेठ २७ गते बिहीवार हुँदैछ । यस पटक सूर्यग्रहण जयेश्थ महिनाको कृष्णपक्षको अमावस्या दिनमा हुनेछ। सूर्यग्रहण दिउँसो १ः४२ मा सुरू भई साँझ ६:४१ मा समाप्त हुन्छ। यो सूर्य ग्रहण उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशियामा आंशिक रूपमा देखिनेछ। जबकि ग्रीनल्याण्ड, उत्तरी क्यानाडा र रूसले पूर्ण सूर्य ग्रहण […]
छोरीहरूले गरे बुबाको दाहसंस्कार, छिमेकीले छुन पनि मानेनन्
June 9, 2021 N88LeaveaComment on छोरीहरूले गरे बुबाको दाहसंस्कार, छिमेकीले छुन पनि मानेनन्
उदयपुर । आफन्त र दाजुभाइ नहुँदा कटारी नगरपालिका–५ बरमझियाका दुई जना दिदीबहिनीले सोमबार बुबाको मृत्युपछि आफैंले श-वयात्रा गरी ‘दाहसंस्कार’ गरेका छन् । स्थानीय ६० वर्षीय बालबहादुर मगरको मृत्युपछि छिमेकीले श’ व छुन नमानेपछि १७ र २० वर्षीया छोरीले नै दाह-संस्कार गरेका हुन् । बालबहादुर बसोबास गर्दै आएको बरमझियामा आफ्नो समुदायका आफन्त र दाजुभाइ छैनन् । दाजुभाइ र आफन्त […]
June 9, 2021 N88LeaveaComment on प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशः असार ९ देखि नियमित सुनुवाइ
काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय […]
राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक स्थलमै चड्कन ! को हुन चड्कन हान्ने?
June 9, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक स्थलमै चड्कन ! को हुन चड्कन हान्ने?
एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोँलाई देशको दक्षिणपूर्वी भागमा भ्रमण गरिरहेको बेला चड्कन हानिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको एक भिडिओमा भ्यालेन्स शहरबाहिरको भागमा भ्रमणको बेला राष्ट्रपति माक्रोँ एक सुरक्षा तगारो राखिएको ठाउँमा मानिसहरूलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यहाँ हरियो टि शर्ट लगाएका एक पुरुषले उनको मुहारमा चड्कन हानेकाछन् । लगत्तै सुरक्षाकर्मीहरूले राष्ट्रपतिलाई तानेर लिएका […]
दक्षिण अफ्रिकामा यी महिलाले एकै पटक जन्माइन् १० जना शिशु
June 9, 2021 N88LeaveaComment on दक्षिण अफ्रिकामा यी महिलाले एकै पटक जन्माइन् १० जना शिशु
काठमाडौँ । दक्षिण अफ्रिकामा एक महिलाले एकै पटकमा १० जना शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । ३७ वर्षीय गोएसामे थामेरा सिथोला नाम गरेकी महिलाले ७ छोरा र ३ जना छोरीलाई जन्म दिनुभएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उनले यस अघि पनि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी बताइएको छ । सिथोलाले एकैपटक १० शिशुलाई जन्म दिएर विश्व रेकर्ड कायम […]